Bulding Glass, n'obi Glass, gwara mmanụ Glass - Joyshing Glass
iko ụlọ ụka
Yantai Joyshing Glass Co., LTD. ， Dị ka a pụrụ iche na-eduga emeputa na soplaya nke dị iche iche na iko ngwaahịa na China, Aims-enye elu onye-nkwụsị iko ngwọta na-ewu, mma, njem, agbachitere, ntụrụndụ & egwuregwu na na.
You ma ka esi etinye ọnụ ụzọ iko eji eme ọfụma
Na mgbe nile ọhụrụ na mmepe nke iko ụlọ ọrụ, iko ngwaahịa e n'ụzọ zuru ezu ike n'ime ndụ anyị, icho mma na ezinụlọ na ugboro ole nke na-eji iko bụ ọzọ na ndị ọzọ Ugboro, na iko ụzọ abụghị nanị na-ewu ụlọ ọrụ a maara dị ka mgbe eji na deco ...
Hot Ikwere Glass
Hot gbajiri iko BY ADMIN NOV. 24, 2020 Igwe eji achọ mma bụ ngwaahịa iko nke etinyere maka ịchọ mma, ọtụtụ n'ime ha abụrụla nke miri emi, gụnyere ịmịcha, ntu oyi, eserese, wdg Joysh ...
Iberibe iko na-ekpuchi elu
Site Yantai Joyshing Glass Co., Ltd mgbe ewu nke yantai HouSha Square iko aja aja cantilever akwa oru ngo, nke ọma dechara, na iko guardrail perimeta nke 136 mita, dum akwa guardrail jiri 15 + 15 àjà ihe ọeredụ tempụ na-egbuke egbuke, otu iko. ogologo nke ...
The Uru nke Laminated Glass
Anszọ iji kwekọọ n'ụkpụrụ mba nke iko laminated, iko dị nro, na iko dị omimi emere site na ha. N'ime ndị a, arụmọrụ zuru oke nke iko laminated na iko dị omimi nke ejiri laminated glass bụ nke kachasị mma. N'ime ụlọ nke oge a, mmetụta mkpuchi ụda dị mma, ọ bụrụkwala otu o ...
Obi Glass, Uru na ọghọm ya, ị maara?
Igwe obi dị jụụ bụ ụdị nke nchekwa nchekwa. N'ezie, ọ bụkwa ụdị iko eji achọ mma. Iji mee ka ike nke iko ahụ dịkwuo elu, a na-ejikarị kemịkalụ ma ọ bụ usoro anụ ahụ eme ihe nrụgide compressive n'elu iko ahụ. Mgbe a na-etinye iko ahụ na mpụga ike, surfa ...